Hiob 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
10 Me nkwa yɛ me kra abofono.+Mɛpae mu aka me haw.Mɛkasa me kra awerɛhow mu! 2 Mɛka akyerɛ Onyankopɔn sɛ, ‘Mmu me fɔ.Ma minhu nea enti a wo ne me redi. 3 Eye ma wo sɛ wobɛyɛ bɔne?+Na eye sɛ wobɛpo wo nsa ano adwuma+ a wobrɛ yɛe,Na wode wo hann ato nnebɔneyɛfo agyinatu so? 4 W’aniwa+ yɛ onipa aniwa?Anaa sɛnea ɔdesani hu ade na wuhu?+ 5 Wo nna te sɛ ɔdesani nna?+Anaa wo mfe te sɛ ɔbarima nna? 6 Dɛn nti na wohwehwɛ me mfomsoNa wokɔ so hwehwɛ me bɔne+ 7 Bere a wunim sɛ menyɛɛ bɔne,+Na obiara nni hɔ a obegye me afi wo nsam?+ 8 Wo nsa na ɛnwenee me, na ɛyɛɛ me;+Ɛyɛɛ me ho biribiara, nanso worepɛ me amene me. 9 Mesrɛ wo, kae sɛ dɔte+ na wode yɛɛ me,Na dɔte mu na wobɛma masan akɔ.+ 10 Woanhwie me sɛ nufusu?Na woamma manyɛ sɛ nufusu a ada?+ 11 Wode were ne honam duraa me ho,Na wode nnompe ne ntini nwenee me boom.+ 12 Womaa me nkwa, na woyɛɛ me adɔe;+Wohwɛɛ me,+ na wokoraa me honhom so. 13 Nanso wode eyinom nyinaa ahintaw wo komam.Minim sɛ eyinom nyinaa wɔ w’adwenem. 14 Sɛ mayɛ bɔne, na woahu me+Na sɛ woamfa me mfomso amfiri me,+ 15 Sɛ midi fɔ a, minnue!+Na sɛ m’asɛm yɛ dɛ nso a, meremma me ti so,+Efisɛ animguase amee me, na amanehunu+ amene me. 16 Sɛ mema me ho so+ a, wobɛtaa me sɛ gyataforo,+Na wobɛyɛ anwonwade wɔ me so bio. 17 Wode w’adansefo foforo bɛba m’anim,Na woama w’abufuw ayɛ kɛse wɔ me so;Amanehunu abɔ amanehunu so wɔ me so. 18 Ɛyɛɛ dɛn koraa na wuyii me fii awotwaa mu bae?+Anka ma minwu na aniwa biara anhu me; 19 Anka meyɛe sɛ nea mamma koraa;Mifi ɔyafunu mu no, anka ɛsɛ sɛ wɔde me kɔ ɔdamoa mu.’ 20 Me nna nyɛ kakraa bi?+ Ma onnyaa me,Ma onyi n’ani mfi me so, na me ho nsan me+ kakra 21 Ansa na makɔ a merensan mma bio+—Mɛkɔ sum asase so ne sum kabii mu,+ 22 Mɛkɔ asase kusuu so, sum kabii muNe sakasaka asase so, baabi a ɛhɔ hann yɛ kusuu.”